Sh.Xassaan: Ninkii Somaliya kala goynaya (Federaal) Hala dilo! [Muxaadaro dood dhalisay] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Sh.Xassaan: Ninkii Somaliya kala goynaya (Federaal) Hala dilo! [Muxaadaro dood dhalisay]
Sh.Xassaan: Ninkii Somaliya kala goynaya (Federaal) Hala dilo! [Muxaadaro dood dhalisay]
February 17, 2013 - By: Khalid Yusuf
Shiikh Xassan oo kamid ah hogaamiye diimeedka Soomaalida ah ee ku sugan Nairobi Kenya ahna shiikh ay si weyn u dhageystaan taageerayaasha dhaq dhaqaaqa Al Shabaab ayaa todobaadkii hore muxaadaro uu jeediyey oo warbaahinta lagu faafiyey uu ku sheegay in la dilo Qof walba oo taageera in la kala gooyo Soomaaliya amam maamulo kala gaar gaar ah loo sameeyo (Federaal).
Warbaahinada taageera Al Shabaab ayaa muxaadiradaasi Sh.Xassan ugu magacdaray “Federalismka” oo micnaheedu tahay in qof walba oo Federalisim aaminsan oo taageera in la dili karo, iyadoo tusaale loo soo qaatay maamulada ka jira Soomaaliya sida Puntland, Somaliland iyo maamul gobaleedka Soomaalida ee Itoobiya.
“…Siyaasada kala qeybinta Soomaaliya waa siyaasada Maraykanka ah waa fikrad gaalada wataan oo reer Galbeedka wataan, Somaliweyn danbe way tagtay, qolada qadiyadan kaliya diidan waa wadaada dagaalamaya (Al Shabaab) maaha kuwa afka aburka ka keenaya (Culumaa’udiinka kale) maaha, cida kaliya oo Soomaaliya u gargaareysa waa Mujaahidiinta qoryaha sita…” ayuu ku yiri muxaaradiisa Shiikh Xassan.
[ Been Maaha in diinta laga sheego, waxaaba hada ka daran intii yareyd ee Soomaaliya oo hada lasii kala wadaa, Shantii Soomaali waa hore baa lagu kala tagay, Somaliya hada waxay mareysaa 50 Madax (Madaxweyne) waxaa socda 50 gobal….waxaa jirta siyaasad iyo fikir sheegaya in Qofkii arrintaasi aamisan lala XISAABTO oo SAFAR DHEER loo diro…] ayuu yiri Shiikh Xassan oo ka hadlayay sidii loo geli lahaa dadka aaminsan fikirka maamulada ku dhisan habka Federaalka.
Shiikh oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri sidan:
“…Nin Walba oo isku daya inuu ummadaas Soomaali kala qeybiyo waa in MEESHA uu TAAGAN yahay lagu Dilo!...Nimanka Baydhabo ku shiraya, kuwa halkan ku shiraya, kuwa Nairobi wareerinaya,….Hadii la gaadi karo waa oo in la Dooxo, sidii loo ummula dooxo, hawshaas waa inaad ku talo gashaan, waa wax aad garateen sow maaha....”
Shiikh Xassan ayaa horey u sheegay inuu takfiiriyey Jamaacada culimada Ictisaamka oo ay kamid ahaayeen Dr.Axmed Xaaji Cabdiraxmaan iyo Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax Allaha u wada naxariistee.
[Halkan ka dhageyso: Muxaadaradii Shiikh Xassan uga hadlay Nidaamka Federaalka]
Hadaladan iyo muxaadarooyinka ShiikH Xasaan waxaa garab socday warbixino ay qorayeen koox la baxday GOBISLAM oo iyagu fikir ahaan taageersan Al Shabaab, kuwaasi oo warbixinadooda si gaar ah ugu weerarayey siyaasada iyo fikirka ururka Ictisaam ee culuma’udiinka Soomaaliyeed oo ay ku eedeenayeen inay taageero u fidiyeen maamulka Puntland.
Warbixinadaasi si gaar ah waxaa loogu soo hadal qaadayey Shiikh Cabdulqaadir Nuur Farax oo ay ku eedanayeen inuu dowlada Puntland garab kusiiyey Ansixinta Dastuurka Puntland oo ay ku tilmaameen mid aan diinta ogoleyn.
Hadaba marka la eego hadalada GOBISLAM kooxda la baxday iyo Muxaadarada Shiikh Xassaan waxaa su’aalo badan la iska weydiinayaa hadaladan kaalin intee la eg bay ka qaateen dilkii foosha xumaa ee loo geystay Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax?
Waxaa xusid muddan in hada ay warbaahinta taageera Al Shabaab bilaabeen inay iska fogeeyaan dilkaasi lala beegsaday Allaha u naxariistee Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax oo jimcihii lasoo dhaafay lagu dilay Garowe isagoo u taagan Salaadii Casar.
Shiikh Xassan Daahir Aweys oo sheegay inuu iska fogeenayo dilka Shiikh Cabdulqaadir!
Dhinaca kale Shiikh Xassan Daahir Aweys oo isagu xubin ka ah Al Shabaab ayaa sheegay inuu iska fogeenayo falkaasi oo uu ku tilmaamay fal fool xun, wuxuuna sheegay inuusan isaga waxna kala socon, isla markaana rag badan oo uu asagu kamid yahay ay aad uga soo horjeedaan, walow uu ka gaabsaday su’aal ahayd inuu hadalkiisa yahay mid ay Al Shabaab u dhan yihiin balse isaga shaqsiyan isu hadlayo.
Shiikh Xassan Daahir Aweys oo ka gaabsaday inuu arrintaasi kasii hadlo ayaa hadalkiisa kusoo cel celiyey in Falkaasi uu yahay mid xun oo khaldan cidii doonta haka danbeysee buu yiri.
Halkan ka daawo Wareysigii Telefishinka Somali Channel la yeeshay Shiikh Xassan Daahir Aweys.